निर्माता - एक हप्ता सोच्नुहोस्
गएका दुई दिनहरुमा हामीले बिचार ग¥यौ कि निर्माण बिना जीवन बनिएको हुन असम्भव छ । निर्माणको लागि तपाईलाई निर्माता चाहिन्छ जसले पुरै ब्रहृमाण्ड, ग्रह, पृथ्वी र यसमा भएका सम्पूर्ण जीवनहरुको योजना गनुभयो ।
यदि निर्माता हुनुहुन्छ भने ,उहाँले ब्रहृमाण्ड बनाउनुभयो तर किन पृथ्वीमा नै उन्नत जीवनहरु राख्नुभयो ? यो सबैको पछी कस्तो प्रकारको ठुलो योजना हुनसक्छ ?
यस्तै अरु प्रश्न पनि दिमागमा आउन सक्छ ः के उहाँले यी सबै सृष्टिहरु बनाएर आफ्नै प्रकारले चलोस भनेर छोडिदिन बनाउनु भयो त ? कि सृष्टिकर्ता आफ्ना सृष्टिलाई लिएर अझै चिन्तित हुनुहुन्छ ? यदि चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाईले कसरी यो थाहा पाउने त ?
यसैकारणले सृष्टिकर्ता अझै उहाँको सृष्टिलाई रेखदेख गर्नुहुन्छ भनि बुभ्mन धेरै गाह्रो छ, किनकी हाम्रो पृथ्वीमा धेरै रहस्य छ , होइन र ? यदि सृष्टिकर्ताले उहाँको सृष्टिलाई स्वचालित मिसिन भन्दा अझ उत्तम बनाउनु भएर छाडिदिनु भएको भए के हुनैश थियोहोला ?यदि उहाँले छनोट गर्न पाउने स्वतन्त्रता सहित योजना बनाउनुभएको भए ? उहाँले सबै प्राणीहरुलाई निर्णयगर्दा आफ्नै स्वतन्त्रता दिनुभएको भए र आफैमा निर्भर हुन सक्षम बनाउनुभयो । यो चाहिँ एउटा वैज्ञानिक तवरले बनेको रोवटहरु जीवनमा आएपछि हुने कृयाकलापमा आधारित एउटा चलचित्र जस्तै छ हुनेथियो
त्यो चाहिँ फरक प्रकारको सृष्टि हुनेछ । यो एक असाधारण प्रकारको निर्माण हो । यदि परिस्थितिहरु कठिन भएरसृष्टिले सृष्टिकर्ताको इच्छा विपरित निर्णय लिए भने सबैकुरा गलत हुनसक्छ । किनकी निर्णयमा स्वतन्त्रता भएकोले, सृष्टिले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई बेवास्ता पनि गर्न सक्छन् ।
यो सृष्टिकर्ता को हुन् त ?
के तपाईसगँ निर्माताको बिषयलाई लिएर केहीप्रकारको सोच छ ? के उहाँ तपाईप्रति चासो राख्नुहुन्छ होला त? कि उहाँको अनगिन्ती सृष्टिहरुमा तपाई एक हुनुहुन्छ ? के त यदि उहाँले तपाईको वास्ता गर्नुहुन्छ र तपाईको लागि योजना राख्नुभएको छ ? के तपाई यो थाहा पाएर डराउदै हुनुहुन्छ ? के तपाई उहाँको योजनासँग परिचित हुनुहुन्छ ? कि योजनाभित्रै छु भनेर तपाई अभिनय गर्दैहुनुहुन्छ , कि आफ्नो जीवनमा जसरी राम्रो हुन्छ तपाई त्यही गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो सृष्टिकर्ता को हुन् त ? के तपाईसगँ निर्माताको बिषयलाई लिएर केहीप्रकारको सोच छ ? के उहाँ तपाईप्रति चासो राख्नुहुन्छ होला त?
कि उहाँको अनगिन्ती सृष्टिहरुमा तपाई एक हुनुहुन्छ ? के त यदि उहाँले तपाईको वास्ता गर्नुहुन्छ र तपाईको लागि योजना राख्नुभएको छ ?
के तपाई यो थाहा पाएर डराउदै हुनुहुन्छ ?
के तपाई उहाँको योजनासँग परिचित हुनुहुन्छ ?
कि योजनाभित्रै छु भनेर तपाई अभिनय गर्दैहुनुहुन्छ , कि आफ्नो जीवनमा जसरी राम्रो हुन्छ तपाई त्यही गर्दै हुनुहुन्छ ?
के तपाई यी प्रश्नहरुको सामना गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ ?
के सृष्टिकर्ता अझै पनि त्यही निर्माणमा नै काम गरिरहनु भएको छ ?
यदी हो भने कसरी तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ?के उहाँको सृष्टि गर्नु पछाडी महान योजना छ?
के सृष्टिकर्ता तपाईको जीवनको भाग हुन चाहानु हुन्छ ?
के तपाई उहाँको महान योजनाको भाग हुनुहुन्छ ? यसको ’boutमा आज विचार गर्नुहोस् र कृपया दिन ४ मा फेरी आउनुहोस् ।
दिन दिन जारी रहनुहोस्